Guddiga doorashada KG oo shuruudo adag hordhigay musharaxiinta - Halbeeg News
Guddiga doorashada KG oo shuruudo adag hordhigay musharaxiinta
BAYDHABO(HALBEEG)- Guddiga doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqay shuruudaha looga baahan yahay inay buuxiyaan musharixiinta u tartamaya madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Shuruudaha ayaa waxa ka mid ah inuu musharax kasta uu bixiyaa lacag dhan 20 kun oo dollar, halka, musharaxiintana haweenka ahna laga rabaa 10-kun oo dollar, inuu yahay muwaadin Soomaali ah oo ka soo jeeda deegaanada Koofur Galbeed.
Sidoo kale shuruudaha guddiga doorashada ay soo saareen ayaa waxaa ka mid ah in murashaxa uuna qabin xaas Ajnabi, in uusan gelin dambi culus oo ay maxkamad xukuntay in da’diisa aysan ka yareyn 40 sano.
Shuruudaha kale ayaa waxaa ka mid ah in musharaxa haya xil in ka hor inta uusan soo gudbin musharaxnimadiisa uu iska casilo xilkaas, kuna soo lifaaqo warqad cadeyneysa in laga aqbalay istiqaaladii xileed.
Guddiga doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa shurudaha la hor dhigay musharixinta ku soo daray inuu ogol yahay in uu hogaansamo habraaca guddiga qaban qaabada doorashada iyo inuu ku qancayo natiijada doorashada.
Doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay dhacdo 17-ka bishan November, iyadoo musharixiinta ay ololohooda doorashada ka wadan Baydhabo.
Ciidamada Jubbaland oo fashiliyay qarax miino